Maitiro ekukumbira kudzoserwa kweApp kubva ku iPhone | IPhone nhau
Maitiro ekukumbira kudzoka kweApp kubva ku iPhone
Pane nguva shoma dzatakaona kuti takapedza yakawandisa mari pachikumbiro icho chisingaunze chero chinhu cheicho chainovimbisa. Muchokwadi, haifanirwe kunge iri mari yakati wandei, kunyepa kuti uwane mari kwakaipa, saka isu tinofanirwa kumhan'ara nekukumbira kudzorerwa kwezvese zvikumbiro izvo kunyangwe hazvo zvakabhadharwa zvakashata chaizvo uye zvisingaite zvinovimbiswa. Sezvo ungatoziva kare, Apple ine yakareruka kudzoka system iyo yandaifanirwa kushandisa kanopfuura kamwe, zvakanaka, Nhasi tiri kuzokuratidza maitiro ekukumbira kudzoreredzwa kwekushandisa zvakananga kubva ku iPhone kana iPad
Kutanga tichaenda kune webhusaiti kunotaura matambudziko ayo Apple akagonesa: HERE
Kamwe pane webhusaiti, isu tinopinda needu Apple ID ruzivo.
Isu tinotsvaga runyorwa rwechikumbiro chatiri kuda kukumbira kudzorerwa.
Kubva pane rondedzero yaanotipa nematambudziko, isu tinosarudza iyo inonyatsoenderana nezvatinoda, ini ndinogara ndichisarudza «Ndiri kuda kudzima uku kutenga«. Apple inotipa nguva yekudzoka kwemazuva gumi nemana.
Iye zvino isu tonyora ipfupiso yekuti nei tichida kudzoreredzwa, ndeapi mavimbiso enhema kana zvikanganiso zvekushanda, kuitira kuti timu inoongorora App Store itore matanho akakodzera.
Iye zvino isu tinongodzvanya kubhatani rebhuruu uye nzira yekudzorera yakakwana.
Neiyi vhidhiyo yekuenzanisira iwe unogona kuzviita zvizere mukati memaminitsi asingasviki maviri, usarasikirwa nechero ruzivo rwekuti zvinoitwa sei.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekukumbira kudzoka kweApp kubva ku iPhone
Rimwe zuva ndakaburitsa chikumbiro uye hazvisi izvo zvandaitarisira uye ndakakumbira kudzoserwa uye mari yechikumbiro yakatodzoserwa zvakanaka nguva dzose
Biographical pfupiso yaSteve Jobs mumaminetsi makumi maviri chete [VIDEO]